Maxay xambaarsan tahay Khudbadda Farmaajo ee Gollaha Shacabka? | Keydmedia
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta oo Sabti ah hortagaya Gollaha Shacabka, isagoo khudbad u jeedin doono Xildhibaanada, oo badankood taageersan mudo-korarsiga labada sano.
Xildhibaanada Gollaha Shacabka ayaa shalay fariimo loogu diray Taleefoonka, iyagoo lagu wargeliyay inuu jiro kulan xasaasi ah, oo Farmaajo imaanayo. [Halkan ka akhri Warka]
"Xildhibaanadda Golaha Shacabka ayaa kulan ku leh xarruuntooda KMG ah ee Villa Hargeysa. Agendaha kulanka ayaa ah Warbixin Madaxweynaha JFS u jeedinayo Xubnaha Golaha Shacabka," sidaas ayay u qornayd fariinta.
Gudoomiye Mursal ayaa sheegay in Farmaajo warbixin ka siin doono go’aannada shirkii Dhusamareeb 2, kaasoo Madaxa DF iyo Maamul Goboleedyada ku kala tagay iyagoo aan heshiis ka gaarin doorashadda.
Sidoo kaloo, Farmaajo ayaa Gollaha la wadaagi doono mowqifkiisa Shirka Dhuusamareeb 3, oo u baaqday sida muuqata xilka-qaadistii Kheyre July 25, oo Maamullada u arkay in loogu gogol xaarayo mudo-korarsi.
Xildhibaanno badan, oo Villa Somalia u balan-qaaday dhaqaale iyo xilal ayaa lagu diyaariyay Gollaha Shacabka, kuwaasoo laga saxiixay dhawaan inay taageeraan codsi mudo-kordhin labo sano, oo Farmaajo u gudbin doono Gollaha Shacabka, sida ay Keydmedia Online ogaatay.
Illo-wareedyo ku dhaw Xafiiska Farmaajo ayaa u sheegay KON in Madaxweynaha uu ku jiro daqiiqadihi u dambeeyey ee magacaabista Ra'iisal wasaaraha cusub, kaasoo uu doonayo inuu la geeyo Baarlamaanka codsigiisa mudo-korarsiga, si loogu meel-mariyo.
Beesha Caalamka ayaa ka digtay dib u dhac ku yimaada doorashadda iyo mudo-korarsi, waxayna qoraalkii ugu dambeeyay ku baaqday in Shirka Dhuusamareeb waqtigiisa lagu qabto, islamarkaana heshiis laga gaaro nooca doorashadda, maadaama waqtiga 3 bilood kahartay.
“Baarlamaanka ama Xukuumadda midna kaligiisa go’aan kama gaaro karo doorashadda Soomaaliya, waxaa loo baalan-yahay heshiis wada-ogol ah, oo dhamaan saamileyda isku raaceen,” ayaa lagu yiro qoraalka.
Mucaaradka iyo Maamul Goboleedyada waxay ka miday-san yihiin in nooca kasta oo doorasho oo la awoodo in la qabto, xitaa dib loogu laabto nidaamka 4.5, balse aan dhicin mudo-korarsiga iyo dib u dhac.
0 Comments Topics: farmaajo gollaha shacabka mursal shirka dhuusamareeb